Annam Noodle Bar & Bites Menu - Yangon | Order Online
Show All Most Popular Cutlery Delicious, Healthy & Authentic Vietnamese Street-food Served Fresh Daily! Starters / Appetizer Rice Rice Dishes Noodles (N) Fried Noodle Dishes Soup (S) Salads Pork Chicken (C) Beef / Mutton Seafood / Prawn (P) Seafood / Crab (C) Fish (F) Clams (C) Squid (S) Mixed Seafood (M) Vegetables (V) Hot Pot Set Menu (D.I.Y) BBQ Hot Plate Set (D.I.Y) Mala Xiang Guo by Annam Dim Sum Beverage
Delicious, Healthy & Authentic Vietnamese Street-food Served Fresh Daily!
Starters / Appetizer
Seafood / Prawn (P)
Seafood / Crab (C)
Mixed Seafood (M)
Hot Pot Set Menu (D.I.Y)
BBQ Hot Plate Set (D.I.Y)
Mala Xiang Guo by Annam
Unit. G55, Urban Asia Center, Corner 48th Street & Maha Bandoola Road, Yangon, MM Botahtaung
Bun Thit Nuong (Dac Biet) - F01/ BBQ Pork Rice Noodle (Special) (စပါရှယျ ဝကျသားကငျဆနျခေါကျဆှဲ)(စပါရှယ် ဝက်သားကင်ဆန်ခေါက်ဆွဲ)
Enjoyed by millions daily in Saigon, thin rice noodle are topped withaspecial tender bbq pork marinated inasecret family recipe and grilled slowly overacharcoal grill. Served withaportion of Vietnamese spring rolls & fresh salad~add sauce to suit your taste and enjoy! Request for more noodles for free!
Cha Gio Annam - F04 Annam Crispy Spring Rolls (3 Rolls) (ဝကျသားကျောပွနျ့ကွျော)(ဝက်သားကော်ပြန့်ကြော်)
Packingatwist which have won fans worldwide, the famous street - food Vietnamese crispy spring roll is made with marinated pork and secret spices - givesasatisfying crunch! ~ go ahead & dip into your favourite chili sauce... try our ANNAM house special today!
Bun Thit Nuong - F02/ BBQ Pork Rice Noodle
Rice noodles are topped withaspecial tender bbq pork marinated inasecret family recipe, grilled slowly overacharcoal grill & served withafresh salad~just add sauce to suit your taste and enjoy!Request for more noodles for free!
Vietnamese Iced Coffee (ဗီယမျနမျကျောဖီအေး)(ဗီယမ်နမ်ကော်ဖီအေး)
Com Ga-F11/ Hainanese Style Chicken Rice (ကွကျဆီထမငျး)(ကြက်ဆီထမင်း)
Fresh chicken steamed cooked withavariety of herbs like fresh ginger and pandan leaf, this famous dish has been introduced from Singapore & Malaysia and is now well becomingastaple in Vietnam. A crowd favourite for those who are in-the-know.
Com Thit Nu'O'ng-F10/ BBQ Pork Rice with Egg Casserole (ဝကျသားကငျထမငျး)(ဝက်သားကင်ထမင်း)
The same BBQ pork grilled to perfection is served onabed of freshly steamed rice. Topped with an egg casserole, this favourite staple of Ho Chi Minh City will bring back memories of old Saigon for sure!
F08. Annam Deluxe Ham Burger
Try out our Annam Hamburgers! Classic sesame seed buns holdingajuicy 200g all beef patty orasmoke grilled chicken cutlet or our secret Annam Deluxe Fried Chicken patty ~ accompanied by our homemade honey mustard sauce and pickles. Nothing else, but freshly fried fries on the side to complete the meal!
Bun Thit Xao-F15/ Rice Noodle with Fried Meat (ဆနျခေါကျဆှဲအသားကွျော)(ဆန်ခေါက်ဆွဲအသားကြော်)
A selection of beef or chicken, the meat is stir fried with herbs and garlic and added toasatisfying bowl of rice noodle. Toss in our famous ANNAM sauce, stir it up and enjoy!
Pad Thai Noodle (ဖကျထိုငျးခေါကျဆှဲကွျော)(ဖက်ထိုင်းခေါက်ဆွဲကြော်)
Mala Xiang Guo Pork Set (ဝကျမာလာရှမျးကော)(ဝက်မာလာရှမ်းကော)
COMES WITH SAUSAGE, MALA NOODLES, EGG NOODLES, MEAT
French Fries (အာလူးချောင်းကြော်) (အာလူးခြောငျးကွျော)
Onion Rings (ကြက်သွန်ကွင်းကြော်) (ကွကျသှနျကှငျးကွျော)
Crispy Fried Chicken (ကြက်ကြွပ်ကြော်) (ကွကျကွှပျကွျော)
Boxing Chicken Fried (ကြက်ကြက်ပေါင်ကြော်) (ကွကျကွကျပေါငျကွျော)
Crispy Chicken Intestines (ကြက်အူကြွပ်ကြော်) (ကွကျအူကွှပျကွျော)
Annam Fried Chicken Wings (ကြက်တောင်ပံအစာသွပ်ကြော်) (ကွကျတောငျပံအစာသှပျကွျော)
Spicy Deep Fried Pork Ribs (၀က်ခြောက်စပ်) (ဝကျခွောကျစပျ)
Deep Fried Spicy Eels (ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်) (ငါးရှဉျ့ခွောကျစပျ)
Battered Century Eggs (ဆေးဘဲဥကြွပ်ကြော်) (ဆေးဘဲဥကွှပျကွျော)
Battered Fish Fingers (ငါးအသားချောင်းကြော်) (ငါးအသားခြောငျးကွျော)
Fried Dough Stick Stuffed with Squid Ball (ကင်းမွန်အစာသွပ်အီကြာကွေးကြော်) (ကငျးမှနျအစာသှပျအီကွာကှေးကွျော)
Prawn Tempura (ပုဇွန်တန်ပူရာ) (ပုဇှနျတနျပူရာ)
Prawn Mayonnaise (ပုဇွန်မရောနစ်) (ပုဇှနျမရောနဈ)
Crispy Fried Chicken Wantons (ကြက်သားဖက်ထုပ်ကြော်) (ကွကျသားဖကျထုပျကွျော)
Mixed Seafood Tempura (ပင်လယ်စာတန်ပူရာ) (ပငျလယျစာတနျပူရာ)
Crispy Spicy Anchovy Fish (ငါးအသေးအကြွပ်ကြော်) (ငါးအသေးအကွှပျကွျော)
Crispy Chicken Skin (ကြက်အရေခွံကြွပ်ကြော်) (ကွကျအရခှေံကွှပျကွျော)
Mini Bacon Sausage Kebabs (ဘေကွန်နှင့်ကြက်အူချောင်းတုတ်ထိုး) (ဘကှေနျနှငျ့ကွကျအူခြောငျးတုတျထိုး)
Cashew Nuts (သီဟိုဋ်စေ့) (သီဟိုဋျစေ့)
Chicken Karaage (ဂျပန်ကြက်ကြော်) (ဂပြနျကွကျကွျော)
Yakitori-Pork Intestines Garlic
Yakitori- Chicken Hearts
Yang Chow Fried Rice (ရနျကြိုးထမငျးကွျော)(ရန်ကျိုးထမင်းကြော်)
Mala Fried Rice (မာလာထမငျးကွျော)(မာလာထမင်းကြော်)
Seafood Fried Rice (ပငျလယျစာထမငျးကွျော)(ပင်လယ်စာထမင်းကြော်)
Annam Golden Fried Rice (Annamရှထေမငျးကွျော)(Annamရွှေထမင်းကြော်)
Steamed Rice with Vegetable (သီးရှကျစုံထမငျးပေါငျးသကျသကျလှတျ)(သီးရွက်စုံထမင်းပေါင်းသက်သက်လွတ်)
Steamed Rice with Meat (သီးရှကျစုံထမငျးပေါငျး)(သီးရွက်စုံထမင်းပေါင်း)
Steamed White Rice (ထမငျးဖွူ)(ထမင်းဖြူ)
Mee Goreng Malaysia (မလေးရှားခေါကျဆှဲကွျော)(မလေးရှားခေါက်ဆွဲကြော်)
Char Kway Teow Singapore (စငျကာပူဆနျပွားခေါကျဆှဲကွျော)(စင်ကာပူဆန်ပြားခေါက်ဆွဲကြော်)
Fried Rice Vermicelli (Bee Hoon) (ကွာဇံကွျော)(ကြာဇံကြော်)
Fried Glass Noodle (ပဲကွာဇံကွျော)(ပဲကြာဇံကြော်)
Bee Hoon Soup with Fish Slice (ငါးအသားလှာကွာဇံပွုတျ)(ငါးအသားလွှာကြာဇံပြုတ်)
Chili Pan Mee (မလေးရှားခေါကျဆှဲ)(မလေးရှားခေါက်ဆွဲ)
Kimchi Ramyeon Soup (ကငျမျခြီခေါကျဆှဲပွုတျ)(ကင်မ်ချီခေါက်ဆွဲပြုတ်)
Mala Tang Noodle Soup (မာလာခေါကျဆှဲပွုတျ)(မာလာခေါက်ဆွဲပြုတ်)
Wanton Mee Dry (Chicken) (ကွကျသားဖကျထုပျပေါငျးခေါကျဆှဲ)(ကြက်သားဖက်ထုပ်ပေါင်းခေါက်ဆွဲ)
Mien Tron-F14/ Fried Vermicelli Noodle (ပဲကွာဇံကွျော)(ပဲကြာဇံကြော်)
Bean vermicelli noodles fried withachoice of vegetables, or with chicken or pork has beenaclassic dish in Hong Kong and South Korea. Also known as Japchae, this may look like an easy dish, but isawell loved favourite all around Asia
Pork Ribs Volcano (ဝကျနံရိုးမီးတောငျ)(ဝက်နံရိုးမီးတောင်)
Farmers’ Catfish Soup (ငါးခူလယျသမားဟငျးရညျ)(ငါးခူလယ်သမားဟင်းရည်)
Tom Yum Soup (ပုသုနျ့ယမျဟငျးရညျ)(ပုသုန့်ယမ်ဟင်းရည်)
Your Choice of Chicke or Seafood.
Hot and Sour Chicken Feet Soup (ကွကျခွထေောကျခဉျြစပျဟငျးရညျ)(ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်ဟင်းရည်)
Mala Chicken Spicy Soup (ကွကျမာလာဟငျးရညျ)(ကြက်မာလာဟင်းရည်)
Spicy Kimchi Vegetable Soup (ကငျမျခြီဟငျးရညျ)(ကင်မ်ချီဟင်းရည်)
Pig Stomach Organ Pepper Soup (ဝကျအူမကွီးငရုတျကောငျးဟငျးရညျ)(ဝက်အူမကြီးငရုတ်ကောင်းဟင်းရည်)
Thai Squid Payaya Salad (ကငျးမှနျသဘောင်္သီးထောငျး)(ကင်းမွန်သဘောင်္သီးထောင်း)
Myanmar Tea Leaf Salad (လကျဖကျသုပျ)(လက်ဖက်သုပ်)
Grilled Meat Salad (Beef/Chicken/Pork/Shrimp/Mutton) အသားကင်အစုံ (အမဲ/ကြက်/ဝက်/ပုဇွန်/ဆိတ်) အသားကငျအစုံ (အမဲ/ကွကျ/ဝကျ/ပုဇှနျ/ဆိတျ)
Spiced Dry Mutton Salad (ဆတျမှထောငျး)(ဆတ်မွထောင်း)
Annam Fried Omelette (ကွကျဥမှကွေျော)(ကြက်ဥမွှေကြော်)
Marinated Pork Ear Salad (ဝကျနားရှကျသုပျ)(ဝက်နားရွက်သုပ်)
Kimchi Fried Sliced Pork Belly (ဝကျသုံးထပျသားကငျမျခြီ)(ဝက်သုံးထပ်သားကင်မ်ချီ)
Pork Belly with Quail Eggs (ဝကျသုံးထပျသားငုံးဥအခြိုခကျြ)(ဝက်သုံးထပ်သားငုံးဥအချိုချက်)
Stir Fried Minced Pork with Basil Leaf (ဝကျပငျစိမျး)(ဝက်ပင်စိမ်း)
Spicy Deep Fried Pork Ribs (ဝကျနံရိုးအစပျကွျော)(ဝက်နံရိုးအစပ်ကြော်)
Sliced Pork with Ginger and Spring Onions (ဝကျအသားလှာဂငျြးမှေး)(ဝက်အသားလွှာဂျင်းမွှေး)
Mala Pork Slice Stir Fry (ဝကျမာလာ)(ဝက်မာလာ)
Grilled Pork Neck (ဝကျဂုပျသားကငျ)(ဝက်ဂုပ်သားကင်)
Crispy Pork Belly (ဝကျသုံးထပျသားအကွှပျကွျော)(ဝက်သုံးထပ်သားအကြွပ်ကြော်)
Crispy Pata - Crispy Pork Leg (ဝကျလကျအကွှပျကွျော)(ဝက်လက်အကြွပ်ကြော်)
Stewed Pork Leg (ဝကျလကျစတူး)(ဝက်လက်စတူး)
Tender Stewed Pork Belly & Organs Set (ဝကျသုံးထပျသားနှငျ့ဝကျအူခြိုစတူး)(ဝက်သုံးထပ်သားနှင့်ဝက်အူချိုစတူး)
Fried Crispy Marinated Intestines (ဝကျအူကွှပျကွျော)(ဝက်အူကြွပ်ကြော်)
Fish Sauce Stir Fry Intestines (ဝကျအူခြိုငနျကွျော)(ဝက်အူချိုငန်ကြော်)
Deep Fried Chicken pieces (ကွကျတုံးကွျော)(ကြက်တုံးကြော်)
Fish Sauce Fried Chicken (ကွကျသားခြိုငနျကွျော)(ကြက်သားချိုငန်ကြော်)
Mixed Chicken Vegetables with Oyster Sauce (အသီးရှကျစုံကွကျသားခရုဆီ)(အသီးရွက်စုံကြက်သားခရုဆီ)
Stir Fry Chicken with Ginger and Spring Onions (ကွကျဂငျြးမှေး)(ကြက်ဂျင်းမွှေး)
Mala Chicken Slice Stir Fry (ကွကျမာလာ)(ကြက်မာလာ)
Kung Pao Chicken (ကွကျကုနျးဘောငျ)(ကြက်ကုန်းဘောင်)
Green Curry Chicken (ကွကျသားအုနျးနို့အစိမျးရောငျဟငျး)(ကြက်သားအုန်းနို့အစိမ်းရောင်ဟင်း)
Chicken Black Pepper (ကွကျငရုတျကောငျး)(ကြက်ငရုတ်ကောင်း)
Famer’s Chicken Feet Stew (ကွကျခွထေောကျအသညျးအမွဈလယျသမားဟငျး)(ကြက်ခြေထောက်အသည်းအမြစ်လယ်သမားဟင်း)
Indonesia Ayam Presto Fried Chicken (အငျဒိုကွကျကွျော)(အင်ဒိုကြက်ကြော်)
Stir Fry Sliced Tender Beef OR Mutton with Ginger Spring Onion (အမဲ (သို့) ဆိတျဂငျြးမှေး)(အမဲ (သို့) ဆိတ်ဂျင်းမွှေး)
Your Choice of Beef or Mutton.
Fried Tender Beef Cubes with Garlic “Bo Luc Lac” (အမဲထောပတျကွကျသှနျဖွူကွျော)(အမဲထောပတ်ကြက်သွန်ဖြူကြော်)
Thai Beef Green Curry (အမဲနှပျ)(အမဲနှပ်)
Spicy Mala Fried Beef OR Mutton (ဆိတျ (သို့) အမဲမာလာ)(ဆိတ် (သို့) အမဲမာလာ)
Black Pepper Beef Cubes Stir Fry (အမဲငရုတျကောငျး)(အမဲငရုတ်ကောင်း)
Beef Tripe Salad (အမဲအူကွမျးသုပျ)(အမဲအူကြမ်းသုပ်)
Traditional Vietnam “ Bò N é ” (S) (ဗီယကျနမျရိုးရာအမဲသားဟော့ပလိတျ)(ဗီယက်နမ်ရိုးရာအမဲသားဟော့ပလိတ်)
Comes with beef, half sausage, egg, bread OR rice.
Traditional Vietnam “ Bò N é ” (L) (ဗီယကျနမျရိုးရာအမဲသားဟော့ပလိတျ)(ဗီယက်နမ်ရိုးရာအမဲသားဟော့ပလိတ်)
Comes with MORE beef, sausage, sardine, egg, rice AND bread.
Fresh Raw Prawn Salad (ပုဇှနျအစိမျးသုပျ)(ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်)
Grilled Tiger Prawns (4pcs) (ပုဇှနျကငျ ၄ကောငျ)(ပုဇွန်ကင် ၄ကောင်)
Crispy Butter Cereal Prawns (ပုဇှနျထောပတျအကွှပျကွျော)(ပုဇွန်ထောပတ်အကြွပ်ကြော်)
Tiger Prawns Steamed with Garlic (4pcs)(ကြားပုဇှနျကွကျသှနျဖွူပေါငျး ၄ကောငျ)(ကျားပုဇွန်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်း ၄ကောင်)
Drunken Tiger Prawns Soup (ပုဇှနျအရကျသမားဟငျးရညျ)(ပုဇွန်အရက်သမားဟင်းရည်)
Tiger Prawns Stir Fry with Sweet Sour Sauce (ပုဇှနျခြိုခဉျြ)(ပုဇွန်ချိုချဉ်)
Big River Prawn Grilled (01pcs) (ပုဇှနျထုပျကငျ ၁ကောငျ)(ပုဇွန်ထုပ်ကင် ၁ကောင်)
Big River Prawn Tossed with Mala Sauce (01pcs)(ပုဇှနျမာလာ ၁ကောငျ)(ပုဇွန်မာလာ ၁ကောင်)
Crispy Soft Shelled Crab (ဂဏနျးပြော့ကွျော)(ဂဏန်းပျော့ကြော်)
Hot and Sour Mud Crab Myanmar (ဂဏနျးခဉျြစပျ)(ဂဏန်းချဉ်စပ်)
Stir Fry Mud Crab with Masala (ဂဏနျးမဆလာ)(ဂဏန်းမဆလာ)
Annam Singapore Chili Crab (စငျကာပူစတိုငျဂဏနျးငရုတျနီဆော့ဈ)(စင်ကာပူစတိုင်ဂဏန်းငရုတ်နီဆော့စ်)
Fresh Swimming Crab Steamed (ပနျးဂဏနျးပေါငျး)(ပန်းဂဏန်းပေါင်း)
*Mud Crab 1 Pc
**Fresh Swimming Crab 1 Pc
Whole Steamed Fish with Lime Sauce (ငါးသံပုရာပေါငျး)(ငါးသံပုရာပေါင်း)
Deep Fried Whole Fish Indonesia Style (ငါးကောငျလုံးကွျော)(ငါးကောင်လုံးကြော်)
Fish Slice Stir Fry with Ginger and Onion (ငါးအသားလှာဂငျြးမှေး)(ငါးအသားလွှာဂျင်းမွှေး)
Crispy Fish Tossed with Mala Sauce (ငါးကောငျလုံးကွျောမာလာဆော့)(ငါးကောင်လုံးကြော်မာလာဆော့)
Crispy Fish Pieces with Chili and Salt (ငါးခွောကျစပျ)(ငါးခြောက်စပ်)
White Clams Steamed with Lemongrass (ဂုံးယောကျမစပါးလငျပေါငျး)(ဂုံးယောက်မစပါးလင်ပေါင်း)
White Clams Stir Fry with Vegetables (ဂုံးယောကျမအသီးအရှကျကွျော)(ဂုံးယောက်မအသီးအရွက်ကြော်)
Bamboo Clams Steamed with Garlic and Vermicelli (4pcs)(ကမာပဲကွာဇံကွကျသှနျဖွူပေါငျး)(ကမာပဲကြာဇံကြက်သွန်ဖြူပေါင်း)
White Clam Meat Stir Fry Annam Mala Sauce (ဂုံးယောကျမမာလာဆော့ဈ)(ဂုံးယောက်မမာလာဆော့စ်)
Squid Stuffed with Meat Thai Style (ကငျးမှနျအစာသှပျ)(ကင်းမွန်အစာသွပ်)
Grilled Whole Squid (ကငျးမှနျကငျ)(ကင်းမွန်ကင်)
Spicy Mala Fried Squid (ကငျးမှနျမာလာဆော့ဈ)(ကင်းမွန်မာလာဆော့စ်)
Crispy Fried Sweet Sour Baby Squid (ကငျးမှနျကွှပျကွျော)(ကင်းမွန်ကြွပ်ကြော်)
Fried Doughstick With Squid Ball (ကငျးမှနျလုံးအစာသှပျအီကွာကှေးကွျော)(ကင်းမွန်လုံးအစာသွပ်အီကြာကွေးကြော်)
Mixed Grilled Seafood Platter (ပငျလယျစာအစုံကငျ)(ပင်လယ်စာအစုံကင်)
Mixed Seafood Curry (ပငျလယျစာဟငျး)(ပင်လယ်စာဟင်း)
Mixed Seafood Stir Fry with Mala Sauce (ပငျလယျစာမာလာဆော့ဈ)(ပင်လယ်စာမာလာဆော့စ်)
Your Choice of Grilled, Steamed or Stir Fry.
Stir Fried Watercress (ကနျစှနျးပလိုငျး)(ကန်စွန်းပလိုင်း)
Kai Lan with Oyster Sauce (ကိုကျလနျခရုဆီ)(ကိုက်လန်ခရုဆီ)
Claypot Tofu Mixed Vegetables (ဂပြနျတို့ဟူးနှငျ့မုနျညှငျးခရုဆီ)(ဂျပန်တို့ဟူးနှင့်မုန်ညှင်းခရုဆီ)
Stir Fry Mixed Vegetables (အသီးရှကျစုံကွျော)(အသီးရွက်စုံကြော်)
Mustard Leaf with Oyster Sauce (မုနျညှငျးခရုဆီ)(မုန်ညှင်းခရုဆီ)
Mala Spicy Hotpot (မာလာဟော့ပေါ့)(မာလာဟော့ပေါ့)
Hotpot Set comes withaset of meat, vegetables and dry noodles.
Tom Yum Hotpot (သုနျ့ယမျဟော့ပေါ့)(သုန့်ယမ်ဟော့ပေါ့)
Vietnam Mutton with Secret Herbs (Mutton)(ဗီယကျနမျဆိတျသားဟော့ပေါ့)(ဗီယက်နမ်ဆိတ်သားဟော့ပေါ့)
Original Chicken Broth (ဟော့ပေါ့အခြို)(ဟော့ပေါ့အချို)
Special Marinated Goat (စပါယျရှယျဆိတျသားကငျ)(စပါယ်ရှယ်ဆိတ်သားကင်)
Seafood Mix (ပငျလယျစာအစုံ)(ပင်လယ်စာအစုံ)
Marinated Sliced Beef (အမဲသားလှာ)(အမဲသားလွှာ)
Chicken Satay (ကွကျဆာတေး)(ကြက်ဆာတေး)
Spicy Pork Belly (ဝကျသုံးထပျသားအစပျ)(ဝက်သုံးထပ်သားအစပ်)
BBQ Set comes withaset of vegetables and meat .
Vegetables Only (အသီးအရှကျနှငျ့မာလာခေါကျဆှဲ)(အသီးအရွက်နှင့်မာလာခေါက်ဆွဲ)
COMES WITH SAUSAGE, MALA NOODLES, EGG NOODLES.
Mala Xiang Guo Chicken Set (ကွကျမာလာရှမျးကော)(ကြက်မာလာရှမ်းကော)
Mala Xiang Guo Beef Set (အမဲမာလာရှမျးကော) (အမဲမာလာရှမ်းကော)
Mala Xiang Guo Mutton Set (ဆိတျမာလာရှမျးကော)(ဆိတ်မာလာရှမ်းကော)
Mala Xiang Guo Seafood Mix Set (ပငျလယျစာမာလာရှမျးကော)(ပင်လယ်စာမာလာရှမ်းကော)
Mala Xiang Guo Mixed Meat and Seafood Mix Set (အသားစုံပငျလယျစာမာလာရှမျးကော)(အသားစုံပင်လယ်စာမာလာရှမ်းကော)
Mala Xiang Guo Mixed Meat, Squid and 01 Big River Prawn (အသားစုံကငျးမှနျပုဇှနျကြားမာလာရှမျးကော)(အသားစုံကင်းမွန်ပုဇွန်ကျားမာလာရှမ်းကော)
Mala Xiang Guo Mixed Seafood and Lobster (ကြောကျပုဇှနျမာလာရှမျးကော)(ကျောက်ပုဇွန်မာလာရှမ်းကော)
Dim Sum - Chicken Full Set
Dim Sum - Pork Full Set
Dim Sum - Seafood Full Set
Hot Instant Coffee (အသငျ့ဖြျောကျောဖီ)(အသင့်ဖျော်ကော်ဖီ)
Hot Instant Tea (အသငျ့ဖြျောလကျဖကျရညျ)(အသင့်ဖျော်လက်ဖက်ရည်)